Where are Hawaii Tourism Leaders when 1.5 million lives depend on them ? | Click to listen to more eTN Podcast Recordings
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa • Raharaham-panjakana • Other • Olona manao vaovao • fanarenana ny dia • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • News News
Aiza ny mpitondra fizahan-tany any Hawaii raha miankina amin'izy ireo ny ainy 1.5 tapitrisa?
7800689 1597813493605 71606938de43a
Home » Lahatsoratra » Tsindrio raha hihaino rakipeo Podcast eTN bebe kokoa » Aiza ny mpitondra fizahan-tany any Hawaii raha miankina amin'izy ireo ny ainy 1.5 tapitrisa?
Ny fizahantany dia raharahan'ny tsirairay any Hawaii, tsy maninona na miasa amin'io orinasa io ianao na tsia. Ny fizahantany no antom-pivelomana ho an'ny Aloha Fanjakana.
Chris Tatum dia ny CEO an'ny Hawaii Tourism Authority, masoivohom-panjakana miadidy ny indostria lehibe indrindra eto, ny dia ary ny fizahan-tany.
COVID-19 dia nanjary fandrahonana ho an'ny indostrian'ny mpitsidika an'i Hawaii tamin'ny martsa 2020, ary tamin'ny volana jona 2020 dia nanapa-kevitra ny hisotro ronono i Chris ary hiaraka amin'ny fianakaviany ho any Colorado.
Ny fivorian'ny birao farany nataony tao amin'ny HTA dia nokasaina ny 27 Aogositra ary i Chris dia haka daty fialantsasatra kely hivoahana aloha any Hawaii.
Hatramin'ny volana martsa ny rafi-telefaona ao amin'ny HTA ary koa ao amin'ny HVCB (The Hawaii Visitors and Convention Bureau) dia mandeha am-peo ihany, ary ny boaty voicemail dia feno ary tsy nihetsika mihitsy. Tsy voavaly ny mailaka, ary ny fahatapahana tanteraka amin'ny fifandraisana dia manakana ny fandraisana andraikitra tsara sy mety hatao mba tsy ho vita
Mufi Hannemann dia lehiben'ny Fikambanan'ny fizahan-tany any Hawaii Lodging ary ben'ny tanànan'i Honolulu teo aloha. Tao anatin'ny COVID-19 dia nanapa-kevitra ny hiala ny fizahantany izy ary nilatsaka hofidina. Te ho ben'ny tanàna indray izy nefa very fotoana be tato ho ato. Ny fihazakazahana ho ben'ny tanàna dia asa maharitra manontolo, ary maneho sy manazava ny tsy famaliany izany.
Daniel Chung dia iray amin'ireo mpikambana birao 12 ao amin'ny Hawaii Tourism Authority. Tena niresaka izy eTurboNews Juergen Steinmetz mpampiantrano ary mijanona ho iray amin'ireo mpikambana 12 ao amin'ny birao HTA manao izany.
Henoy ity resaka ity.